Qeylo dhaan ka soo yeereysa Beelaha Biyamaal & Xawaadle ee sida loo maamuley xubnaha beeshooda (Dhageyso) – idalenews.com
Beesha Biyamaal ayaa shir ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ku sheegey in si khaldan loo maamuley xubnaha Ugaas Abdi sheekh ayaa ku eedeeyey dowlada in ugaasyo been abuur ah lagu bedeley ugaasyadii soo jireenka ahaa.
Nabadoon Cali Xasan Kuuleey oo sidoo kale eed kulul dusha uga tuurey madaxda dowlada kmg oo xubno xildhaano beesha xawaadle gudbiyey. Waxuuna sheegey in dhaqanka, waxgaradka, iyo culimaa’udiinka beesha Xawaadle dalbanayaan in loo soo celiyo xubnaha beesha lagana daayo faragelinta.
Khilaaf aad u ba’an iyo isqabqabsi beelaha dhexdooda iyo weliba masuqmaasuq baahsan ayaa hareerey soo xulista xubnaha cusub ee barlamaanka, si kasta oo ay ahaataba wax ku qeybsiga nidaamka qabaa’ilka ama waxa loogu yeero 4.5 ayaa asal u ah dhibaatada beelaha dhexdooda ka taagan. Taasoo xaalada dalka ku jira uga sii daraysa haddaan dadka Soomaaliyeed u madax banaanaan in codkooda si xor ah u dhiibtaan iyagoo aan cid kale isu daba taagin.